पश्चिम सर्दै ठुला उद्योग - Nepalgunj Business
पश्चिम सर्दै ठुला उद्योग
बिरगन्जमा नारायणी सिमेन्ट उद्योग सन्चालन गर्दै आएको चाचान समूहले बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा चारवर्ष अघि बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग सन्चालनमा ल्यायो । देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना ‘चाचान’ समूह जय बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग मार्फत पश्चिम नेपालमा प्रवेश गरेको हो ।
भैरहवामा छड उत्पादन उद्योग चलाइरहेको अम्बे समूहले त्यहाँको प्लान्ट भन्दा पनि ठुलो क्षमताको अम्बे स्टिल उद्योग जानकी गाउँपालिकामै स्थापना गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने उत्पादनको तयारी छ । रु ३ अर्व लगानीमा बनेको उक्त छड उद्योग पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो हो ।
विगत अढाई दशकदेखि खानेपानीका ट्यांकी उत्पादन गर्दै आएको विराटनगरको रिजालको फेनोलेक्स इन्डस्ट्रिजले पश्चिम नेपालको कोहलपुरबाट पनि ट्यांकी उत्पादन गर्ने भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको पिपरी भन्ने स्थानमा १४ कट्ठा जमिन लिएर तथा बालाजू औद्योगिक क्षेत्रमा गरी दुबै स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।
बासुदेवपुरमा पाँच तारे होटल सोल्टी पूर्णरुपमा सन्चालनमा छ भने देशकै सबैभन्दा ठुलो भाटभटेनी सुपरमार्केट सन् २०१९ भित्रै नेपालगन्जको कारकाँदोमा सन्चालन हुने निश्चित छ । अहिले पुर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।
पश्चिम नेपालको ‘ट्रान्जिट’ बाँकेमा ठुला औद्योगिक समूहको आर्कषण बढेको यि उदाहरणले पुष्टि गर्छ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै बाँकेले (केन्द्रमा नेपालगन्ज) प्रशासनिक र राजनैतिक शक्ति गुमाएको छ । तर पश्चिम नेपालको ‘आर्थिक हब’ बन्ने दौडमा भने उत्साह थपेको छ । पूर्वमा मात्र केन्द्रीत उद्योगहरु एकपछि अर्को गर्दै बाँकेमा खुल्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थिरता पछि देशभर लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाईदा बाँकेलाई भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
ठूला उद्योग स्थापना हुन थालेपछि बाँके लगानीका लागि अब्बलक्षेत्र हो भन्ने सन्देश देशभर प्रवाह भएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा बाँकेले गुमाएका पुराना उद्योग पुनस्र्थापना भएको र नयाँ स्थापना हुनेक्रम तीव्र गतीमा बढेको अध्यक्ष बैश्यको बुझाईछ । स्थानीयदेखि देशका ठूला र नाम चलेका औद्योगिक समूह लगानी गर्न हौसिएका छन् । ‘राजनीतिक स्थिरता र उर्जा लगायतका समस्या समाधान भएपछि लगानीको उत्साह थपिएको छ । बाँके औद्योगिक हबका रुपमा विकास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । बाँके जिल्ला लगानीकर्ताका लागि आफैमा सुनौलो ठाउँ भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । राजनीतिक अस्थिरता र उर्जा लगायत समस्याले लगानीकर्ता आउन हिच्किचाए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य प्रवेशद्वारा बाँके भएकोले पछिल्लो समय ठूला लगानीकर्ता आकर्षित भएको उनले बताए । ‘अहिले अवस्था सुध्रिएको छ । एकपछि अर्को ठूलो उद्योग खुल्ने क्रम जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो वातावरणलाई संधै यस्तै बनाईराख्न जरुरी छ ।’
थपिए यि उद्योग
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा बाँकेमा उद्योग संचालनका लागि जय अम्बे स्टील, सगरमाथा स्टील इण्डष्ट्रिज, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक प्रालि, गोल्डेन गेमिङ्ग इन्टरनेशन क्यासिनो, वर्षा रिसाईक्लिङ्ग ईण्डष्ट्रिज, विकास फ्लोर मिल र भिभो मोवाइल नेपाल प्रालिको सर्भिस सेन्टरले अनुमति पाएका थिए ।
अनुमति पाएका मध्ये अधिकांस उद्योग संचालनमा छन् । केही उद्योगले पूर्वाधार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् । केही महिनामा पूर्वाधार निर्माणको काम सक्ने उद्योगीले जनाएका छन् । उद्योग बिभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/ ०७४ भन्दा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा बाँकेमा ठुलो उद्योग स्थापनासंगै लगानीमा पनि तीब्र बिस्तार भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा बाँकेमा चार वटा उद्योग स्थापना भएका थिए । ती उद्योगमा ५६ करोड हाराहारीमा लगानी भित्रिएको थियो । सातवटा उद्योगबाट जम्मा एक सय ४२ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा बाँकेमा उत्साहजनक लगानी भित्रिएको उद्योग बिभागको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष बिभागमा दर्ता भएका सात उद्योगले जिल्लामा ७ सय ८२ जनालाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको वातावारण सिर्जना गरेका छन् ।
स्टील र छडमा आर्कषण
बाँके जिल्लामा स्टील उद्योगको आर्कषण नै देखिएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्यागिक समूह जय अम्बे स्टील प्रालिले जानकी गाउँपालिकामा रु. चार अर्व १५ करोड चुक्तापुँजी सहित उद्योग संचालनको तयारी गरिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै सगरमाथा स्टील उद्योगले पनि जानकी गाउँपालिकाको खजुराखुर्दमा रु. २४ करोड चुक्ता पुँजी सहित उद्योग स्थापना गरेको छ । उद्योग बिभागका अनुसार, दर्ता भएका सात मध्ये नेपाल वेलहोप एग्रीटेक प्रालिको चितवन पछिको दोस्रो शाखा हो । चितवनमा रहेको उद्योगले कोहलपुरमा रु. २४ करोड लगानी गरे उद्योग संचालनमा ल्याइसकेको छ ।
उक्त उद्योगले दानाहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । बाँकेमा रु. २४ करोड लगानीमा भिएमआई ग्रुप अन्तर्गत बर्षा रिसाईक्लिङ्गले प्रेसर कुकुर उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै विकास फ्लोर मिलले रु. २ करोड ४५ लाख लगानी गरेको छ । भिभो मोवाइल प्रालिले अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर स्थापनाका लागि रु. ३० लाख लगानी गर्ने उद्देश्य सहित गत आर्थिक वर्षमा उद्योग बिभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र लिएको छ ।
बाँकेमा होटल क्षेत्रमा सोल्टी समूहले समेत पाँच तारे होटल संचालनमा ल्याएको छ ।
यसकारण बाँकेमा लगानी गर्ने
संघीयता पछि बनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पठाउने उपयुक्त ठाउँ बाँके भएको छ । ति दुई प्रदेशसँगै प्रदेश ५ लाई चाहिने बस्तुको हिस्सा ओगट््न कुनै पनि उद्योगले बाँकेमा औद्योगिक प्लान्ट राख्नै पर्ने बाध्यता भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक जसो हरेक उत्पादनको बजारक्षेत्र बढ्दै गएको छ । विकास निर्माण तीव्ररुपमा भइरहँदा निर्माणका सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको शहरीकरणले उपभोग्य सामग्रीको बजार थपिदैछ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्वमा उत्पादन भएका सामग्री पश्चिममा ल्याएर बिक्री गर्दा ढुवानी धेरै रकम खर्चिनु भन्दा यही उद्योग खोलेर उत्पादन गर्नु उद्योगीका लागि दीर्घकालिनरुपमा फाईदाजनक हुने देखेर उद्योगीहरु बाँकेका विभिन्न स्थानमा उद्योग स्थापना गर्न तम्सिएको शिखर प्लाईउड प्रालिका प्रोप्राइटर चम्पालाल बोथराले बताए ।
ठूलो स्केलमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्ने र पश्चिममा बजारको राम्रो सम्भावना देखेर उद्योगीले बाँकेलाई उद्योग संचालनका लागि रोजेको उनले बताए । ‘बाँकेमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनुको अर्को कारण सहजरुपमा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने हो,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँभन्दा सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध हुने भएका कारण पनि यहाँ लगानीकर्ताको आर्कषण देखिन्छ ।’ भारतसंग सीमा जोडिएको र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणको क्रममा रहेकोले बाँकेलाई उद्योगीले रोज्न थालेको हुन । नेपाल–भारत जोड्ने रेल र पूर्व–पश्चिम रेल संचालनमा आए त्यसले आयात निर्यातमा समेत फाइदा पुग्ने दूरदृष्टि राखेर यहाँ उद्योग संचालन गर्न उद्योगीहरु बाँकेलाई उपयुक्त स्थानको रुपमा देखेको परेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मध्यनजर गरि सरकारले बाँकेको नौवस्तामा प्रदेश ५ कै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शुरु गरिसकेको छ ।
आर्थिक हब बनाउन मुख्य मन्त्रीको प्राथमिकतामा
प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्जलाई आर्थिक हब बनाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र यसैको एउटा उदाहरण हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नेपालगन्जलाई आर्थिक हब बन्न कसैले नरोक्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि र औद्योगिक विकासलाई महत्वका साथ अगाडी बढाईरहंदा बाँकेले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिने निश्चित छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा बन्न लागेको ओद्योगिक क्षेत्रको काम सम्पन्न हुँदा थप उद्योग भित्रिने निश्चित छ । आर्थिक सम्मेलनमा पहिलो पटक नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई सोकेसमा समावेश गर्न सक्नु पनि आफै ठुलो कुरा हो । प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि बिभिन्न छुट, औद्योगिक ग्राम निर्माण जस्ता बिषयलाई बजेटमा समावेश गरेकाले आगामी दिनमा उद्योगको संख्या झनै बढ्ने छ । प्रदेश सरकारको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र केन्द्र सरकारले ओद्योगिक करिडोर निर्माणको नीति लिएकाले झनै उत्साह थपेको छ । कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकास गरेर प्रदेशलाई अब्बल बनाउने मुख्यमन्त्री सोंच कार्यान्वयनमा आउँदा बाँकेले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिने निश्चित छ छ । बाँकेले आश गरेको यही हो ।
केन्द्र सरकारको नीति पनि आश लाग्दो
संघीय सरकारले आ.व २०७६र २०७७ को बजेटमा पनि बाँकेलाई औद्योगिक विकासका लागि केही नीतिगत बिषयलाई समावेश गरेको छ । जमुनाह कोहलपुर ओद्योगिक करिडोर बनाउने कुराले यहाँ उत्साह थपेको छ ।
लगानी सम्मेलनको चर्चा
बाँके र बर्दियामा लगानी भित्रा्उन लगानी सम्मेलन गर्ने बहस र छलफल भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, जो नेपालगन्जकै हुनुहुन्छ उहाँकै पहलमा लगानी सम्मेलन हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसले यसक्षेत्रको ओद्योगिक विकासमा झन् टेवा पुर्याउने देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, असार १४, २०७६ 2:48:51 PM